Ja (2021) – Gold Channel Movies
Video Sources 4940 Views Report Error
အမျိုးသမီးတွေသာမရှိရင် ဒီကမ္ဘာကြီးကလည်း မကြာခင်ပျက်ဆီးသွားပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်မွေးဖွားလာတာဟာ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့အမျိုးသမီးတွေဟာ မနက်ဖြန်ရဲ့မိခင်လောင်းတွေပါ။ မိခင်လောင်းတွေမရှိရင် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေလည်း ပေါ်ထွက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေကို လေးစားပါ ကယ်တင်ပါ နွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံကြပါ။ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ အသန့်ရှင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အာဂျွန်းဟာ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗာဆူဆိုတဲ့မိန်းကလေးကို တွေ့ပြီးတဲ့နောက် အာဂျွန်းရဲ့အချိန်အားလုံးဟာ ဗာဆူအတွက်ပဲ ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြတဲ့အတွက် လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အာဂျွန်းရဲ့အမေက ဗာဆူနဲ့သဘောမတူချင်ပေမယ့် သားရဲ့ဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးခဲ့ပါတယ်။ အာဂျွန်းနဲ့ဗာဆူ လက်ထပ်ပြီးတော့ အာဂျွန်းရဲ့အမေနဲ့ အတူနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ သူတို့အိမ်မှာဖြစ်လာပါတယ်။ ဗာဆူဟာ အရမ်းကြောက်လန့်နေပြီးတော့ မူမမှန်တဲ့အပြုအမူတွေပြုလုပ်နေတာကို အာဂျွန်းတို့သားအမိ ရိပ်မိနေခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်တော့လည်း အိပ်ရေးပျက်ပြီးစိတ်ကစဉ့်ကလျားတွေ ဖြစ်နေတယ်ပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ အနားယူပြီး လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ရင် သက်သာသွားမယ်လို့လည်း အားပေးစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗာဆူကိုလယကြည့်ပေးတဲ့ မိသားစုဆရာဝန် အာဂျွန်းတို့အိမ်ကအပြန်လမ်းခုလတ်မှာ ဘယ်လိုအသတ်ခံလိုက်ရလဲ? အာဂျွန်းတို့အိမ်မှာ ခြောက်လှန့်နေတဲ့သရဲဟာ ဘာအညှိုးကြောင့် မိသားစုအားလုံးကို အသေသတ်ပစ်ချင်နေတာလဲ? အာဂျွန်းတို့မိသားစု ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့အမှားကို လုပ်ခဲ့မိလဲဆိုတာတော့……
Review and Translated by Maymie Kyaw
Original title Ja
IMDb Rating 7.4 1,262 votes
Download Yandex HD 720p Myanmar 950 mb
Download Mediafire HD 720p Myanmar 950 mb
Download Megaup HD 720p Myanmar 950 mb
Download Yoteshin Drive HD 720p Myanmar 950 mb
Download G Drive HD 720p Myanmar 950 mb
Download Mega HD 720p Myanmar 950 mb